बाहिरियो थप रहस्य: एसपी विष्ट र उनका छोराको डिएनए मिलेन ! || सुनौलो नेपाल
बाहिरियो थप रहस्य: एसपी विष्ट र उनका छोराको डिएनए मिलेन !
काठमाडौँ कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्यामा विवादित बनेका एसपी डिल्लीराज विष्ट लगायत तीन जनाको डिएनए परीक्षणको रिपोर्ट आएको छ।
रिपोर्ट अनुसार विष्ट, उनका छोरा किरण र भीमदत्त नगरापालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टका भतिजा आयुष विष्टको परीक्षण रिपोर्ट आएको हो।रिपोर्ट अनुसार तीनै जनाको डिएनए मेल खाएन। आशंका गरिएका तीनै जनाको परीक्षण असफल भएपछि घटना थप रहस्यमय बनेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले एसपी विष्टको डिएनए परीक्षणका लागि टोलीसमेत गठन गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका एसपी कुबेर बहादुर कठायतले रिपोर्ट मेल नखाएको बताए। कठायतले भने, ‘तीनै जनाको रिपोर्ट आएको छ। तर, मेल खाएन।’
नेपाल प्रहरी र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका फरेन्सिक चिकित्सक डा. हरिहर वस्तीसहितको टोलीले डिएनए परीक्षण गरेको थियो।गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले भदौ ९ गते एसपी विष्टलाई निलम्वन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आइत, अशोज १४, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस